मान्छेकोआत्माको वजन२१ ग्राम ? कसरी जानी राखौ – Sandesh Munch
प्राचीन मिश्रका बासिन्दाहरुमा एउटा मान्यता थियो कि मृत्युपछि मानिस एउटा लामो यात्रामा निस्किन्छ । मृत्युपछिको उक्त यात्रा निकै कठिन हुन्छ । मिश्र सभ्यताको इतिहासअनुसार उक्त यात्रामा रा भनिने सूर्य देवताको डुंगामा चढेर हल अफ डबल ट्रुथसम्म पुग्नु पर्दछ अरे ।
किम्बदन्तीहरुका अनुसार मान्छेको सत्यता पत्ता लगाउने उक्त हलमा आत्माको लेखाजोखा गरिन्छ र फैसला गरिन्छ । त्यहाँ सत्य र न्यायकी देवीको कलमको तुलना मानिसको आत्मासँग गरिन्छ ।
प्राचीन मिश्रका मानिसहरुमा यस्तो मान्यता थियो कि मानिसका सबै राम्रा तथा नराम्रा कर्महरुको हिसाब उसको आत्मामा लेखिएको हुन्छ । यदि मानिसले सादा र निष्कपट जीवन बितायो भने उसको आत्माको वजन प्वाँखजस्तै कम हुन्छ र उसलाई स्वर्गमा सधैका लागि ठाउँ प्राप्त हुन्छ ।
मिश्रको उक्त प्राचीन मान्यताको एक झलक सन् १९०७ मा जर्नल अफ द अमेरिकन सोसाइटी फर साइकिक रिसर्चमा प्रकाशित एक शोधमा देखिएको थियो ।
उक्त अस्पतालका मालिक एक यस्ता व्यापारी थिए जसको व्यापार मुख्यरुपमा चीनसँग थियो । उनले चीनबाट ल्याउने विभिन्न वस्तुहरुमध्ये फेयरब्यांकको एउटा तराजु पनि थियो । उक्त तराजु पहिलोपटक सन् १८३० मा बनाइएको थियो र त्यसले ठूलो वस्तुहरुको समेत सटीक मापन सजिलैसँग गर्न सकिन्थ्यो ।
डाक्टर डंकनले जहाँ काम गर्दथे उक्त अस्पतालमा उनले दैनिक मान्छेको मरण देख्दथे । अस्पतालमा वजन मापनका लागि राखिएको मेसिन देखेर उनको दिमागमा मानिसको आत्माको समेत वजन मापन गर्ने विचार पलायो ।
उनले तराजुलाई यसरी तयार पारेका थिए कि त्यसले निकै कम वजन परिवर्तन हुँदा समेत त्यसको मापन गर्न सकिन्थ्यो । गम्भीर विरामी भई बाँच्ने सम्भावना नभएका मानिसहरुलाई त्यस्ता ओछ्यानमा राखिन्थ्यो र उसको मर्ने प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिन्थ्यो ।
त्यसक्रममा शरीरको वजनमा भएको परिवर्तनलाई उनले निरन्तर टिपोट गरे । मरेसँगै मानिसको शरीरमा पानी, रगत, पसिना, मलमुत्र, अक्सिजन र नाइट्रोजनको स्तरमा स्वभाविक रुपमा हुने परिवर्तनलाई समेत ध्यानमा राखेका थिए ।
उक्त शोधका क्रममा उनीसँग चारजना अरु डाक्टरहरुले पनि काम गरेका थिए र सबै जनाले ती आँकडालाई अलग अलग टिपोट गरे ।
डंकनका अनुसार उनले १५ वटा कुकुरमा समेत यस्तो प्रयोग गरे । तर कुकुरमा भने त्यस्तो नतिजा आएन । मृत्युको समयमा कुकुरको शरीरको वजनमा कुनै परिवर्तन भएन ।
त्यसबेला के निष्कर्ष निकालियो भने मृत्युको समयमा मानिसको शरीरको वजनमा परिवर्तन आउँदछ किनकी मानिसको शरीरमा आत्मा हुन्छ र मृत्युपछि त्यो आत्मा शरीरबाट उड्दछ । तर कुकुरको शरीरमा आत्मा नहुने हुनाले मृत्युसँगै उसको वजनमा परिवर्तन आउँदैन ।
उक्त शोधका आधारमा अहिले पनि यस्तो मान्यता राखिन्छ कि मानिसको आत्माको वजन ठ्याक्कै तीन चौथाई औँस अर्थात् २१ ग्राम हुन्छ । किनकी शोधमा संलग्न चारजना मानिसको डाटामध्ये पहिलो मानिसको शरीरमा मृत्युसँगै ठ्याक्कै २१ ग्राम तौल कम भएको पाइएको थियो।#onlinekhabar
Prev‘मलमासमा के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
Nextदशैंमा देशभर लक डाउन ! स्वास्थ्य मन्त्रालय